noocyada axadiista | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Haddii aad akhriso kutubta xadiiska waxaad badanaa arki habab kala duwan oo ay muxadithiintu xadiiska u sheegaan. Waxaad arki muxadithka oo mar dhahaya ” xadathanii” marna odhanaya ” xadathanii ijaazatan” haddii aadan ahayn mid aqoon uleh hababka loo weriyo axaadiista iyo xukunadooda waad ku wareeri ayaa laga yaabaa.
Waxaa jira 8 hab ama nooc uu qofku xadiska ku werinayo. Mar waxa jirta uu sheekha afkiisa ka maqlo xadiiska, marna waxuu maqli sheekha oo uu arday meesha fadhiya ku dul akhrinayo xadiis , sheekhuna uu ku raacsanyahay ardaygu waxuu akhrinayo, marna sheekh ayaa arday wadan kale jooga intuu waraaq u diro ku odhanaya axaadiistaydan qaado oo iga weri (yacni sidii adoo afkayga ka maqlay oo kale). Hadaba noocyadan aan hadda tusaale ahaanta usoo qaatay iyo in kale oo hadhayba waxay leeyihiin xukun. InshaAllah waxaan isku dayi inaan dhamaantoood soo wada qoro.
Bal marka hore maxay kala yihiin 8-da hab/qaab ee axaadiista loo xanbaaro ama loo weriyo?.
السماع من لفظ الشيخ=Sheekh in afkiisa laga dhagaysto
الوِجَادَة=Al wijaadah Waxaan isku dayaynaa inaan mid welba si gooni ah u sharaxno, kuna sii dheeraan mahayno inshaAllah.
Waxaa weeye iyada oo uu sheekhu akhrinayo xadiiska, ardayguna dhagaysanayo. Ha ahaado sheekhu mid kor ka xifdisan xadiiska ama mid kitaab ka eegaya, sidoo kale ardayguna ha ahaado mid maqlaya xadiska kadibna qoraya ama mid maqlaya balse koru un ka xifidaya.
Jamhuurul culumaa waxay sheegaan noocan inuu yahay kan ogu sareeya hababka xadiiska lagu weriyo ama lagu xambaaro.
Noocan waxaa kale oo la yidhaahdaa ”al caradh/soo bandhigid”. Waa iyada oo xadiiska uu akhrinayo ardaygu sheekhuna dhagaysanayo. Ha ahaado ardaygan xadiiska werinaya laftiisa cida sheekha ku dul akhrinaysa ama cid kale oo majliska fadhiday. Sidoo kale ha ahaado akhriskan la akhrinayo kitaab dhexdii ama dusha/xifdis. Sidoo kale sheekhu ha ahaado mid dusha ka xifdisan xadiiskan la akhrinayo ama mid kitaab ka eegaya.
Qolo tidhi noocan iyo kii hore (yacni ee ahayd In sheikh laga dhagaysto) way simanyihiin. Waxaana fikirkan laga weriyaa : Imaam Maalik, Bukhaari iyo Culimada Xijaaz iyo Kuufa badankood.
Qolo tidhi Noocan aya ka hooseeya noocii hore. Waxaana fikirkan laga weriyaa Jamhuurta ehlu mashriqa<< Fikirkan ayaana saxsan.
– Sida ogu wanaagsan waxaa weeye in la yidhaahdo
Waa sheekha oo u baneeya ama u idma ardaygu inuu ka weriyo kitaab mucayin ah ama guud ahaan axadiistiisa . Tusaale: Waxaan kuu idmay inad iga weriso kitaabka Saxiixul bukhaariga.
4) Inuu sheekhu u idmo qof majhuul ah ama wax majhuul ah: Tusaale: waxaan kuu idmay inaad iga weriso Sunanka, waxaana laga yaabaa sheekhu inuu weriyo kutub badan oo sunan ah. Ama inuu yidhahdo waxaan u idmay Muxamed Ibnu Khaalid Ad-dimishqiy inuu iga weriyo axadiista, waxaana laga yaabaa inay buuxaan oo ay joogaan koox dhan oo magacan leh. Hadaba waa kee?.
– Noocyada danbe oodhan khilaafka ka taagan waa mid daran oo badan. Calaa iyo kulli xaaal xadiiska habkan loo xanbaaro eena loo weriyo waxuu wattaa xoogaa khafiifnimo/dhaciifnimo mana wanaagsana in la sahlado oo la dhibyaraysto.
(Waxaa isiiyay ijaazo hebel)
2) Ama Ijaazo lama socoto. Tusaale: Inuu sheekhu siiyo arday kitabkiisa balse uu ku gaabsado inuu dhaho uun “ waa axadiis aan maqlay”. (yacni iga sii weri muusan odhan).
1) Haddii ay tahay nooca hore oo ah “ Middan ijaazada la socoto” waa la ogalyahay werinteeda waxayna ka daraja hooseysaa iyadoo laga maqlay afka sheekha ama sheekha lagu dulakhriyay .
Culimadu way isku khilaafeen laba qawl ayayna ukala baxeen.
Inaysan banaanayn < waxaana hadalkan yidhi in kabadan hal muxadith, waana hadalka saxsan .
Werinta noocan ahi waa baab kamid ah munqadica laakiin hadana itisaal/xidhiidh ayaa ku jira.
” ناولني ” أو ” ناولني ” وأجاز لي ”